Mareykanka oo qorsheynaya in uu Ciidamadiisa kala baxo Soomaaliya - Awdinle Online
Mareykanka oo qorsheynaya in uu Ciidamadiisa kala baxo Soomaaliya
Madaxweyne Trump ayaa qorsheynaya in uu Amar ku bixiyo in laga soo saaro kumaanka Askari ee ka jooga dalal ay ku jirto Soomaaliya, kuwaas oo halkaasi loo geeyay Arrimo la xiriira dhinaca Amniga.
Wadamada Ciraaq, Afghanistan iyo Soomaaliya ayaa Trump u qorsheysan in militariga Mareykanka ee jooga laga soo saaro, ka hor inta uusan Xafiiska ku wareejin Bisha Janaayo Madaxweynaha Cusub ee Mareykanka Joe Biden.
Qorshaha ugu horeeyay ee bixitaanka Ciidamada ayaa laga bilaabi doonaa wadanka Ciraaq, iyada oo laga saari doono 3,000 oo askari, sida uu hoay u shaaciyeen Pentagonka.
Dalka Soomaaliyana, in ka badan 700 oo askari oo ku lug leh tababaro iyo howlgalo argagixiso ayuu maamulka Trump qorsheynayaa inuu kasoo saaro, qorshahaas oo dhowr bilood ka hor la shaaciyay.
Qorshaha ka bixitaanka Soomaaliya ayaa la sheegay inuusan quseynin ciidamada Mareykanka ee ku sugan meelaha u dhow Kenya iyo Jabuuti, halkaasoo ay ku sugan yihiin diyaaradaha fuliya duqeymaha ka dhanka ah Al-Shabaab.
Previous articleKulamo looga hadlayo Doorashooyinka Soomaaliya oo ka socda Nairobi
Next articleMadaxweynaha Galmudug oo cadaadis xoogan la kulmaya